De ahoana moa enao no voaray @ asa!!! Enao aza kivy sahady - 1er Pas - Transformez ce rêve en realité
Efa tapitra nalehako dol zao karazan’orinasa zao fa tsisy valiny mihitsy! Na koa hoe: ity ne de ateriko any fotsiny CVko ty fa tsis de manantena be lotra an’ity ah! Efa 100 mahery zay ny dossierko zay fa tsisy valiny mitsy sns… Enao aza tsy manantena be azy, de ny mpampiasa hanantena inona aminao?
Noho ny rafim-papianarana tsy mifanaraka amin’ny fianana ankehitriny de tsy mitsahatra mitombo ny tsy an’asa eto amintsika. Ny tanora vao nahavita fianarana no tena maro anisa amin’izany. Gestion na droit no nandanianao taona maro de Call Center no offre bobaka, tsy aleo zany tonga de niasa fa tsy naka maitrise. Iza no omena tsiny?? Tsisy na dia iray fa ny tsirairay avy no samy handini-tena. Efa zatra manao copie lotra tsika de kopia hatramin’ny chomage. Gestion nataony teo aloha de mba hanao gestion koa, droit ze tsy afaka hivelomana de maro ny mpianatra miazakazaka hanao azy sns….
Apetrako eo ny mahakasika an’iny fa ny tiako resahina androany dia hoan’ireto tsy an’asa kivikivy lava ty. Eny oiziz ah sarotra ny mitady asa kanefa mananosarotr’azy rehefa kivy ianao. Tokony ho courage foana, tokony ambony moraly fa tsy maintsy tafa. Fa ny hakiviana tsy hitondra vahaolana fa vao maika misintona miaratsy kokoa aza. Zao ny Tadidio an, raha ny mifoha maraina ianao no falifaly de lasa mahafinaritra ny tontolon’andro. De otran’izay koa raha tezitezitra vao maraina de ny tontolon’andro no simba. Ka noho izany vao maika hanimba anao io hakiviana io.
Ny hafatra: AZA KIVY LETSY BEBY EH
Devenir entrepreneur, impossible hoan’ireo zatra manao revin-gadra